Mumwe Mutori weNhau Orambwa neMusikana Uye Kusarurwa neVavakidzani Mushure Mekubatwa neCovid-19
Nyamavhuvhu 17, 2020
Mumwe mutori wenhau akabatwa nechirwere cheCovid-19 anoti ari kusarurwa munzvimbo yaanogara, uye akarambwa nemusikana waaifanirwa kuroora mukupera kwegore rino nepamusana pekuti ainge abatwa nechirwere ichi.
Kudzai Madzivire anoti akaongororwa pamwechete nenhengo dzekomiti yeparamende pakiriniki yemuGweru, akazoshamiswa achiona zita rake rakanyorwa padandemutande achinzi aiva atapurirwa Covid 19.
Madzivire anoti pakatanga veruzhinji kuziva kuti aive neCovid-19, vanhu vakawanda vakabva vatanga kumusema.
Madzivire anoti musikana wake waaida kuroora mukupera kwegore, akamuramba netsambambozha yaakatumira parunhare mbozha achiti aiva asisakwanise kuenderera mberi nezvehurongwa rwokuti varoorane.
Madzivire anoti pakabuda nyaya iyi iye aiva asati ava kuratidza kurwara, asi akazotanga kurwara achirwadziwa muchipfuva akatomboedza kutsvaga rubatsiro kumakiriniki emuBudiriro asi hapana akauya kuzomuona.
Madzivire anoti akazoguma atsvaga hama neshamwari dziri mubazi rehutano, zvakazoita kuti awane mubhedha kuchipatara cheParirenyatwa uko kwainzi kwakazara, asi akakwanisa kuwana mubhedha ndobva aiswa pamushini wekufema.
Madzivire anoti hapana kana mushonga waakapiwa kunze kweParacetamol yokupodza marwadzo. Madzivire anoti akaona vanhu vaifa zuva nezuva zvinova zvimwe zvakakonzera kuti asapore nekukurumidza nokuti aifunga kuti haabude muchipatara ari mupenyu.
Munyori muukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, Dr Norman Matara, vanoti pari zvino hapasati pave nemushonga weCovid 19, asi pane mamwe matanho avakadzidziswa nesangano reWorld Health Organisation, anovabatsira kuziva kana munhu ari kurwara neCovid 19.
Amai vaMadzivire, Amai Viola Madzivire, vanoti kana hama dzavo dziri kuvasema zvichitevera kubatwa kwakaitwa mwana wavo nechirwere ichi.
Vanoti ivo vave kuzeza kuenda kumigodhi kunochera mvura, kuzvitoro kunotenga zvokudya nokuti vave kuonekwa semunhu ane maperembudzi.
Nyanzvi yezvehutano hwepfungwa inoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health, Dr Ignatius Murambidzi, vanoti kusarurwa kwevanhu vane Covid 19 kuri kuitika munzvimbo dzakawanda, kusanganisira vanhu vanoshanda nezvehutano avo vanofungidzirwa kuti ndivo vane ruzivo pamusoro peCovid 19.
Dr Murambidzi vanoti kusemwa nekusaarurwa kunokonzera kuti vaye vanenge vaita marwadzo, vasaongororwa zvokuti vanozopedzisira vaparadzira chirwere ichi vasingazive kuti vanacho.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvehutano, Dr Ruth Labode, avo vakawanikwa vaine Covid-19 mushure mekuongororwa, vanoti zvakakosha kuti munhu wese aongororwe kana aine chirwere ichi.
Zimbabwe, sedzimwe nyika dzepasi rose, iri muNational Lockdown senzira yekuedza kudzivirira kupararira kweCovid-19, iyo yauraya vanhu zana nemakumi matatu nevaviri, kusanganisira vaive gurukota rezvekurima, VaPerrence Shiri.